Nzuzo Nke Anti | Ọkọwa Okwu Ahụike
Mụtakwuo banyere Anti-Fungal Natural Remedies
Anti-Fungal - Ero nwere ike banye ebe dị mma ma nwee mmiri ma na - enyekarị shuga nri. Chapu shuga nwere ike inye aka ịlụ ọgụ fungus ma ọ bụ yist, mana o nyere iwu kpochapụ yist n’ahụ, a ga-enwerịrị ya n’ime eriri ahụ site n’imechi obere ihe na-eme n’ime afọ. N'ihi oke mmiri ọgwụ ndị a na-amanye ihe a kpọrọ mmadụ site na ọgwụ mgbochi, ọgwụ nje, ọgwụ ndị ọzọ, nri na-egbu egbu, mmiri na nri Jenetically Modified (GMO), ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile taa na-arịa ọrịa leaky gut syndrome. ShopFreeMart ogwu ogwu ma nyekwa aka ma nyere aka gwo oria ojoo ma hichaa candida. Ekwesịrị iwere ha abụọ kwa ụbọchị na ihe na-aga n'ihu site n'aka ndị niile na-arịa ọrịa fungal na ma ọ bụ ndị nke na-egbu egbu.